အလိုရှိသည့် စာမျက်နှာ ဆောင်းပါး
ငြင်းမရ သည့် အမှန် တရား တစ်ခု
ဩဂုတျ ၃၁, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဩဂုတျ ၂၁, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
တရားမျှတမှု မောင်လာအလီ(အ.စ) သခင်ကြီး ၏ အမြင်
ဩဂုတျ ၂, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ဇူလိုငျ ၈, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
“ဂဏန်း၊ ပုတ်သင်၊ ၀ါးပင် ၊ နွားသိုး၊ လိပ်မျိုး၊ ခွေးအ၊ ဤခြောက်ဝ နာယက မတင်ထိုက်။” ၁။ ဂဏန်း = လက်မထောင်ခြင်း ၂။ ပုတ်သင် = ပြောသမျှခေါင်းငြိမ့်ခြင်း ၃။ ၀ါးပင် = လေသင့်ရာယိမ်းတတ်ခြင်း ၄။ လိပ်မျိုး = မိမိဘက်သို့ယက်တတ်ခြင်း ၅။ နွားသိုး = ရှူးရှူးဒိုင်းဒိုင်းလုပ်တတ်ခြင်း ၆။ ခွေးအ = ကောက်ကျစ်ခြင်း ဤခြောက်ဝ မှတ်ပါ အနာယက ။
msm မှ Malar Than ရေးသားထားသည့် ပို့စ် အားအဗ်နာ စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များအဗ်နာသတင်းဌာန မှ မျှော်လင့်ပြီး တိုက်ရိုက်ကူးယူတင်ပြအပ်ပါသည်။
အမှန်တကယ် အလွဲ သုံးစား လုပ်သူ ဆို သည်ကား ???
ဇှနျ ၉, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) အစေခံ ၊ ရှိက်ခ် ဂျမားလ် ဟိုစိုင်း(န) ကွမ်း ၊ ရေးသား ထားသည့် ((အမှန်တကယ် အလွဲ သုံးစား လုပ်သူ ဆို သည်ကား ???)) ပို့စ်အား အင်ရှာအလ္လာဟ် အကျိုး အထူးရှိမည်ဟု မျှော်လင့် မိ ပါသဖြင့် ကျွန်တော်များ အဗ်နာ သတင်းဌာနမှ ၊လေးစားအပ်ပါသော ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဇှနျ ၈, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
သေဆုံးခြင်းနောက်ဝယ် နေသူ ရေးသား သီးကုံး ထားသည့် “သေဆုံးခြင်းနောက်ဝယ်” ပို့စ်အား စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များအဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီး msm site မှ နဆင့် တင်ပြအပ်ပါသည်။
စလ်မားဖွါသွေမဲဟ်ရေးသားထားသည့်သောင်ဗါ (၀န်ချတောင်းပန်ခြင်း) အား msm site မှ တိုက်ရိုက် ချစ်ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် ကူးယူဖော်ပြ လိုက်ပါသည်။ အဗ်နာ သတင်းဌာန
မိုဟမ္မဒ် မာဆူမ်အလီ ရေးသားသီးကုံးထားသည့် ((ကုရ်အာန်အကြောင်းသိကောင်းစရာ)) အား အဗ်နာ စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များ အဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီးတင်ပြအပ်ပါသည်။
ဤဆောင်းပါးလေး တွင် ရကူ၏အရေးပါမှုမှု ကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များ အဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီးတင်ပြအပ်ပါသည်။
နမာဇ်ကိုပထမအချိန်တွင်အလေးပေးမှု ကို တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ် ချစ်ပရိသတ်များ အတွက် အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိမည်ဟု ကျွန်တော်များ အဗ်နာ မှ မျှော်လင့်ပြီးတင်ပြအပ်ပါသည်။
မေ ၂၇, ၂၀၁၂ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
စဝါဗ် ဝဇူ နှင့်ပတ်သက်ပြီး တစ်စိတ်ဒေသ ကို ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။စာဖတ်သူများအတွက် အကျိုးရှိမည် ဟုမျှော်လင့် မိ ပါသဖြင့် အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) သတင်းဌာန ၊အဗ်နာအနေဖြင့် မြန်မာ ရှီအာ မွတ်စလင် ဆိုက် မှ တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ဘဝ သမိုင်း အကျဉ်း
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ဘဝ သမိုင်း အကျဉ်း ကိုယ်တော်၏အမည်မှာဟဇရတ်အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ဗင်အေမာမ်မူစာ(အလိုင်ဟစ်စ လာမ်)ဗင်ဂျအ်ဖရ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ဖြစ်ပါသည်။ မယ်တော်အမည်မှာ-ဟဇရတ်(သ)ဂျနာဗေနဂ်ျမာ(သို့)သကသွမ်ဖြစ်ပြီးမိမိခေတ် ကာလ၌သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်(ဂုဏ်သတင်းရှိသူ)အမျိုးသမီးများမှတစ်ဦးဖြစ်ပေသည်။
လေ့လာကြပါစို့ အဟ်လေ့ဘိုက်(အ.စ) လား ? စွန္နတ်သီ လား ?
وسنتی မှန်ပါသလား (သို့မဟုတ်) وعترتی اهل بیتی အင်မတန်ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်တော် တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဟဒီးစ်စေစ ကာလိုင်းအားဟဒီးစ်ပါရဂူများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ကျမ်းဂန်များ၌ ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။မလွဲမသွေ၎င်းပုံစံနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုသာလျှင်မှန် ကန်ပေမည်။ပုံစံနှစ်မျိုးသည်ကား။ الف:'کتاب اللّہ و عترت أهل بیت' ب:'کتاب اللّہ وسنت'
အေမာမ်အလီ(အ.စ)၏ ဘဝသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်။ အပိုင်း(၁)
အေမာမ်အလီ(အ.စ)သည်အဗူသွာလိ(ဗ်)(အ.စ)၏လေးယောက်မြောက်သား တော်ဖြစ်ပြီးဖွာသွိမ(ဟ်)(အ.စ)ဆို သည့်မြင့်မြတ်သောမိခင်တော်မှရဂျဗ်လ၁၃ရက်သောကြာနေ့တွင်မကာမြို့ရှိကာ့(အ်)ဗ(ဟ်)ကျောင်းတော် အတွင်း ၌ ဖွါးမြင်တော်မူ ခဲ့သည်၊
ဦးဖိုးလေး(ခ)ဦးစိုးမြင့် (မရ်ဟွမ်) (ဇာကိရ်) တောင်ကြီးအေမာမ်ဘာရာ ရေးသားသီးကုံးခဲ့သည့် “ပညာလိုချင်လျှင် အလီတံခါးမှလာပါ” အား မြန်မာရှီအာ မွတ်စလင်ဆိုက်မှ အဗ်နာ သတင်းဌာနအနေဖြင့် ကူးယူဖော်ပြလိုက် ပါသည်။